Global Voices teny Malagasy » Moldavia : Ny fiantraikan’ny Twitter tamin’ireo fihetsiketsehana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 25 Aogositra 2020 15:25 GMT 1	 · Mpanoratra Veronica Khokhlova Nandika (fr) i Claire Ulrich, avylavitra
Sokajy: Moldavia, Fanoherana, Fifidianana, Hafanàm-po nomerika, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Teknolojia
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Aprily 2009 – Amin'ny teny anglisy ny rohy raha tsy nasiana fanamarihana manokana. Betsaka ny rohy no tsy mandeha intsony ka dia niniana tsy natsofoka afa-tsy ny fitanisàna izay voasoratra tamin'izany fotoana izany sisa)
Somary nilamindamina ihany ny andro fahatelo tamin'ireo hetsipanoherana nialoha ny fifidianana tao amin'ny renivohitra môldavy. Mihai Moscovici no nanoratra ity  tao amin'ny Twitter tamin'ny Alarobia 8 Aprily maraina :
Tsy be vahoaka androany. Zara raha nisy mpanao hetsipanoherana teo amin'ny kianja lehibe eto Chisinau, Moldavia […]
Iray tamin'ireo hafatra nalefa tamin'ny Twitter, nalefa vao maraina be tamin'ny Alakamisy maraina 9 Aprily :
Tsy misy mpanao hetsipanoherana eo amin'ny kianja lehibe eto Chisinau. Milamina ny tontolo izao eto Chisinau, Moldavia […]
Nitohy ny Alarobia ireo fifampiresahana ety anaty ateriento momba ny anjara toeran'ny fampahalalambovao ety anaty tambajotra tao anatin'ny fikarakaràna sy ny fandrakofana ireny hetsika tao Chisinau ireny  – izay nanomboka tamina diabe iray aloha, am-pilaminana ny Alatsinainy ary nivadika ho fifandonana nahery setra ny Talata.
Nandefa fanavaozana iray i Evgeni Morozov tao anatin'ilay lahatsorany momba ny “Twitter Revolution” tao amin'ny Foreign Policy's Net Effect:
[…] 3. Tena nanampy marina tokoa izany ka na ireo Amerikàna tsy mahalala na inona na inona momba ny teknolojia aza, ary ampahany lehibe tamin'i Eoropa andrefana dia babon'ny Twitter ny fony amin'izao fotoana izao. Tena tsara mihitsy ny hoe tsy ny tambajotra sôsialy Friendster na LiveJournal (izay mbola mijanona ho ny sehatra fanoratana bilaogy ankafizin'ny ankamaroan'ireo mpampiasa aterineto any Eoropa atsinanana) no nampiasain'ireo Môldavy mpianatra niketrehana ity revôlisiôna ity. […]
Rootwork nametraka ity fanehoankevitra ity, tamin'ny fitsaràna ilay fanamarihana nataon'i Morozov ho “tena tsy voalanjalanja”:
[…] Ity fomba fijery iray ity no ohatra amin'ny fomba fanafangaroana ny tetikady amin'ny fitaovana. Raha hazavaina misimisy kokoa: tsy voatery ho ny fisarihana ny sain'izao tontolo izao no tanjon'izay rehetra hetsika fitakiana fiovàna.
Mahafantatra an'io ny ankamaroan'ireo mpitaky fiovàna sôsialy. Misy fotoana ianao mitady izay hananganana fahatongavan-tsaina sy / na hisintonana ny sain'ireo mpampahalala vaovao, fa tsy izany foana akory no voatery ho tanjona voalohany amin'ny hetsika iray. Raha ny raharahan'ireo Môldavy mpianatra, ny tena ilain'ireo mpikarakara, dia ny fomba iray hamantarana ny tena sy hiarahana mametraka paikady — ary ho an'ireo filàna ireo, tena mety ho (na farafaharatsiny, fitaovana iray faran'izay mivantambantana).
Mety hisy izay làlan-tsaina izay raha toa ka jerenao ho toy ny fitaovana iray azo ampiasaina ny Twitter, tonga lafatra ho an'ny paikady sasantsasany, ary tsy mahomby ho an'ny hafa. Raha amin'ny maha-paikady, misy finoana iray toy ny amin'ny fivavahana mihitsy ho an'ny Twitter (na ny teknolojia rehetra) mitondra mankamin'ny fanakelezana ny tena paikady – fisarihana ny sain'izao tontolo izao hiatrika ny tena tanjona, satria izany no vitan'ny Twitter ny manao azy, ka moa va tsy izany !
Amin'ny raharaha môldavy, angamba nahasintona ny sain'ny tany ivelan'i Môldavia ireo mpîkarakara, noho ny asa nataon'ireo ampolony vitsy mpampiasa Twitter, saingy tsy tratrany ny tanjona voalohany napetrak'izy ireo hoe hanao izay hahitàn'ireo Môldavy hafa ny fanoheran-dry zareo ny fitondràna.
Ato  ny tohin'ny fisaintsainan'i Rootwork.
Nanjohy ilay resaka ihany koa i Daniel Bennett tao amin'ny Twitter ary i Môldavia tao amin'ny bilaogy Frontline Club – ato  sy ny “The Lede” tao amin'ny New York Times dia namoaka antsafa iray nifanaovana tamin'i Mihai Moscovici – ato .
Moscovici namoaka ity hafatra ity tao amin'nyTwitter , ora vitsy talohan'ny nanoratana ity lahatsoratra ity, izay tena mamintina tsara io fifanakalozandresaka io:
Tsy takatr'ireo mpampahalala vaovao tandrefana fa ny hoe #pman dia tsy momba ny Twitter akory. Ny #pman dia momba ireo hetsipanoherana manohitra ny kaoministra ao Chisinau, Môldavia mba hitakiana fifidianana vaovao.
[Raha hijery misimisy kokoa ireo lahatsoratra tany aloha  momba ireo fihetsiketsehana tany Moldavia, amin'ny fiteny anglisy]
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2020/08/25/149505/
 no nanoratra ity: https://twitter.com/Moscovici/status/1475234651
 hafatra nalefa tamin'ny Twitter, nalefa vao maraina be tamin'ny Alakamisy maraina 9 Aprily: https://twitter.com/Moscovici/status/1479597837
 anjara toeran'ny fampahalalambovao ety anaty tambajotra tao anatin'ny fikarakaràna sy ny fandrakofana ireny hetsika tao Chisinau ireny : https://globalvoicesonline.org/2009/04/08/moldova-grape-revolutiontwitter-revolution/
 namoaka ity hafatra ity tao amin'nyTwitter: https://twitter.com/Moscovici/status/1479375768
 lahatsoratra tany aloha: https://globalvoicesonline.org/-/world/eastern-central-europe/moldova/